PRISM: Okpokoro iji meziwanye Mgbanwe Mgbasa Ozi Gị | Martech Zone
PRISM: Okpokoro iji meziwanye Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi gị
Wednesday, November 2, 2016 Tọzdee, Machị 4, 2021 Ian Cleary kwuru
Nke bụ eziokwu bụ na ị naghị ere ahịa na ntanetị mgbasa ozi ma ị nwere ike ịmepụta ahịa site na mgbasa ozi mmekọrịta ma ọ bụrụ na ị mejuputa usoro njedebe zuru ezu.
Usoro PRISM 5 anyị bụ usoro ị ga - eji wee meziwanye mgbanwe mgbasa ozi mmekọrịta.
N’isiokwu a anyị ga-akọwapụta ya Nzọụkwụ 5 ma kwụpụ ihe atụ ị nwere ike iji maka usoro ọ bụla nke usoro ahụ.
Nke a bụ PRISM:
Iwulite PRISM ikwesiri inwe usoro dị ukwuu, ọdịnaya na ngwaọrụ ndị ziri ezi. Maka usoro ọ bụla nke PRISM enwere ngwaọrụ dị iche iche dị mkpa.
P maka Ndị mmadụ
Iji nwee ihe ịga nke ọma na mgbasa ozi mmekọrịta ị kwesịrị inwe ndị na-ege ntị. Kwesịrị iwu ndị na-ege gị ntị na-agbanwe agbanwe mana ọ dịkwa mkpa ka ị nyochaa ndị na-ege gị ntị iji hụ na ndị na-ege ntị dị mkpa. Enweghị isi na inwe nde mmadụ 1 ma ọ bụrụ na ha adịghị mkpa.
Otu ihe eji eme ihe bu Affinio nke na-enye nkọwa zuru ezu na ndị na-eso Twitter gị. Can nwere ike iji ngwa ọrụ ahụ n'efu ma ọ bụrụ na inwee ndị na-erughị 10,000. Maka ikpo okwu ọ bụla ịchọrọ iji nyochaa ndị na-ege gị ntị kwa oge iji jide n'aka na ọ bara uru.
R maka mmekọrịta
Iji mee ka ndị na-ege gị ntị lebara gị anya, ịkwesiri ka gị na ndị na-ege gị ntị nwee mmekọrịta. Na-ewulite mmekọrịta n'ọtụtụ na iji ọdịnaya ma ọ bụ wulite mmekọrịta na 1 ruo 1 na isi ihe dị mkpa.
Iwulite mmekorita ikwesiri iji igwe ihe eji elekọta mmadu ihe dika Agorapulse. Agorapulse ga - amata ndị nọ na mmiri iyi gị bụ ndị na - eme ihe ike ma ọ bụ ndị mmadụ na - esonyere gị oge niile. I nweghi ike iwulite mmekọrịta gị na onye ọ bụla na usoro 1 ruo 1 yabụ ịkwesịrị ilebanye anya na ndị na - eme ihe ike ma ọ bụ ndị na - eme ya.
M maka Inbound Traffic
Ọwa mgbasa ozi abụghị maka ịre ahịa ka ị wee mejuputa usoro iji kpalite okporo ụzọ site na mgbasa ozi na ebe nrụọrụ weebụ gị. I nwekwara ike ịkwọ ụgbọala n'okporo ụzọ ndị ọzọ, dịka ọmụmaatụ, iji blọọgụ.
Otu ngwá ọrụ dị ukwuu iji nyere gị aka ịmata isiokwu iji mepụta ọdịnaya gburugburu bụ Semrush. Dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike itinye aha ndị asọmpi gị wee chọpụta isi okwu 10 kachasị na-anya ụgbọ ala na saịtị ha. Nwere ike ịmepụta ọdịnaya gburugburu isiokwu ndị a ma ọ bụ ihe yiri ya.
S maka ndị debanyere aha na Social Retargeting
Imirikiti ndị ọbịa gị na-elekọta mmadụ agaghị azụta na nleta mbụ wee nwee ike ịnwale ma jide nkọwa ha iji email. Optinmonster bụ otu n'ime ngwaọrụ kachasị mma ijide email dị.
Ọ bụrụ na ndị ọbịa anaghị enye adreesị email ha, ị ka nwere ike weghachite ndị ọbịa a na mgbasa ozi na Facebook ma ọ bụ nyiwe ndị ọzọ.
M maka Monetization
Ikwesiri iwulite ulo oru ntughari nke ghaghari ndi nleta gi ma obu ndi debanyere aha gi na ahia. Otu n'ime akụkụ kachasị mkpa maka monetization bụ ịtọ ntọala maka usoro ọ bụla nke olulu gị. Ntughari bụ nnukwu ngwaọrụ maka ịme nke a.
Usoro mgbasa ozi dị mma maka iwulite ndị na-ege ntị na ịmara banyere gị, ụlọ ọrụ gị, ngwaahịa na ọrụ gị.
Ma…. ọ dịkwa oke mma maka ịmepụta ahịa ma ọ bụrụ na i mejuputa usoro njedebe zuru ezu. Ikwesiri ighota uzo nile nke ahia ahia nke ndi mmadu ma mejuputa atumatu a ma jiri ihe eji eme ihe maka uzo obula.
Nwere ike iji usoro a maka ire ahịa mgbasa ozi?
Tags: mgbasa ozi mmekọrịtantughari ntughariinbound marketinginbound okporo ụzọmonetizationPRISMusoro mgbasa oziịkpata ego banyere mmekọrịta mmadụ na ibe yammekọrịta mmekọrịta mmekọrịtana-elekọta mmadụ retargetingdebanyere aha onye debanye aha